Guddoonka KMG ah ee BF oo fariintii ugu horreysay u diray xildhibaanada cusub - Caasimada Online
Home Warar Guddoonka KMG ah ee BF oo fariintii ugu horreysay u diray xildhibaanada...
Guddoonka KMG ah ee BF oo fariintii ugu horreysay u diray xildhibaanada cusub
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha cusub ee ku-meel gaarka ah ee agolaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad Cabdisalaan Xaaji Axmed “Dhaban-cad” ayaa sheegay in doorashada xilligeeda daahday ay sababtay in adduunka uu fikrad kale ka qaato Soomaaliya islamarkaana digniin ay ku bixiyeen inay jaran doonaan dhaqaalaha ay ku taageeraan Soomaaliya.
Dhaban-cad ayaa isagoo u mahad celinayay ra’iisul wasaare Rooble iyo guddiga doorashada wuxuu codsaday in sida ugu dhaqsaha badan loo soo dedejiyo doorashada xildhibaanada dhiman maadaama waqtiga dheeraaday, caalamkana uu digniin siiyay dalka.
“Waxaan codsanayaa in kuraasta dhiman lasoo dedejiyo, iyadoo la wada og-yahay fikrada adduunka naga haysto in waqtigii dheeraaday, oo digniin nala siiyay oo lacagaha go’aya iyo banuuqda xermeysa oo la og yahay inta cadaadiskaas nalagu wado, waxaan farayaa xildhibaanada golaha shacabka ilaa laga doorto guddoomiyaha rasmiga iyo ku-xigeenadiisa inaan qofna maqnaan karin, fasaxna uusan jirin, maalinta sabtida 9:00 subaxnimo iyo Villa Hargeysa” ayuu yiri.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Aqalka Sare Maxamed Cali Yuusuf “Gaagaab” ayaa iclaamiyay in xubnaha Aqalka Sare maalinta sabtida soo xaadiraan xaruntooda, islamarkaana aysan jiri doonin qof ka maqnaan kara kulankaasi maadaama shaqo badan sugeyso, wax badanna laga sugaayo.
Guddoomiyaha KMG aqalka sare Maxamed Cali Yusuf Gaagaab iyo Guddoomiyaha KMG aqalka hoose Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan “Dhabancad” ayaa noqday xildhibaanada ugu da’da weyn labada aqal, sidaasina ay ku noqdeen guddoonka KMG.
Guddoomiye Gaagaab oo deegaan doorashadiisa tahay Puntland iyo Dhaban-cad oo reer Galmudug ayaa laga sugayaa inay kasoo dhalaalaan howsha loo igmaday gaarsiinta guddonka rasmiga ah ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare.